Afarta 4-aad ee Khariidaynta Mashiinka Raadinta Casriga ah | Martech Zone
Dunida SEO ayaa xoogaa ruxeysa wararka sheegaya Moz waxay shaqaalaheeda kala bar ka jareysaa. Waxay sheegaan inay sii laba jibaarayaan iyadoo diirada la saaray cusbooneysiinta raadinta. Waxay horyaal iyo lamaane lama huraan u ahaayeen warshadaha SEO sannado hadda.
Aragtideyda maahan rajo wanaagsan ka qabta warshadaha Raadinta Dabiiciga ah, mana hubo inay tahay halka ay tahay in Moz ay laba jibbaarto. In kasta oo Google uu sii wado dhisitaanka saxnaanta iyo natiijooyinka tayada iyada oo loo marayo sirdoonka macmalka ah iyo algorithms la sifeeyay, shuruudaha shaqaalaynta la taliyayaasha raadinta iyo shaqaaluhu way tagayaan. Iyo Qalabka SEO ayaa soo ifbaxaya toddobaad kasta oo la tartamaya sida Moz.
Shan sano ka hor, inteena badan la talinta suuq geynta dadaallada waxaa loo hibeeyay SEO. Waxaan haysanay falanqeeye SEO ah. Advance 5 sano oo waxaan ka faa'iideysanaa aaladaha cajiibka ah kafaalaqaadkeena at gShift kaas oo bixiya aragti ku saabsan joogitaanka websaydhka oo dhan, ma aha oo kaliya raadinta noolaha. Isku dar ah Analytics iyo maamuleyaasha websaydhada, xalka gShift wuxuu naga caawinayaa inaan la socono dadaalkeena suuq geynta omnichannel, oo ay kujirto waxqabadka dabiiciga ah, marka lagu daro cilmi baarista saameynta leh, helitaanka waxyaabaha, kormeerka sumadaha, iyo waxbadan oo dheeri ah.
SEO maahan warshad mar dambe; waa qayb ka mid ah warshadaha. Waa muuqaal ka mid ah barxadda. Waa xeelad gudahood istiraatiijiyad suuq geyn digital ah. Waxaa loo baahan yahay aqoon u leh suuq kasta, maahan booskiisa. Suuqgele kasta waa inuu fahmaa sida looga faa'iideysto makiinadaha raadinta ee ku jira istiraatiijiyad guud oo la fahmo halka ay ku habboon tahay adduunkeenna omnichannel. Muddo aad u dheer, waxaan daawanay sida shirkadaha SEO-yada iyo aaladaha ay uga seegeen doontii ku-habboonaanta beddelaadda, qorista waxyaabo aad u wanaagsan, iyo kobcinta hagitaannada illaa beddelaad. Muddo aad u dheer, warshadaha SEO-ga waxay ku saabsanaayeen gadaal isku xirnaanta, ereyada muhiimka ah, iyo darajada halka macaamiisha iyo matoorada raadinta ay horumareen.
Khubaradu way igu diidi doonaan aniga, laakiin waxaan haynaa boqolaal macaamiil ah oo ku kobcaya diiradda cusboonaysiinta. In kasta oo aan wali hubinno in macaamiisheenna bogaggooda lagu dhisay talobixinta Google oo aan sii wadno kormeerida darajada, maahan halka aan ku dabaqno inta badan dadaalkeenna mar dambe. Waxaan ahay ma isagoo leh SEO waa muhiim maaha, wali waa kanaalka aasaasiga ah ee soo iibsiga. Waxaan leeyahay maalgashiga SEO ma helayo soo celinta xeeladaha kale. Istaraatijiyadahaasi waa dhiirrigelinta bulshada, dhiirrigelinta lacagta la siinayo, xiriirka dadweynaha iyo dhisidda maktabad nuxurkeedu sarreeyo.
Horumarinta Bulshada - Himilooyinkaaga iyo macaamiishaadu ma booqdaan bartaada si joogto ah. Si kastaba ha noqotee, waxay ku hawlan yihiin bulsho ahaan. Si aad isugu xirto halka ay rajadaada iyo macaamiishaadu joogaan, waa inaad ku dhiirrigelisaa waxyaabahaaga halka ay joogaan. Kuwaas oo ka hadlaya baraha bulshada waxay badanaa gaaraan dhagaystayaal cusub, oo markaa nagala hadlaya khadka tooska ah, iyagoo dhisaya maamulkayaga raadinta dabiiciga ah.
Xayeysiinta Mushaharka Leh - In kasta oo aan jeclaan lahayn WOM iyo wadaagista fayraska waxyaabaha ku jira si loo ballaariyo gaadhista magacyadeenna, runta fudud ayaa ah in xayeysiintu tahay buundada ay tahay inaynu maalgashanno si loo ballaariyo gaadhistaas. Fursadahaas la bixiyay waxay badanaaba gaaraan dhagaystayaal cusub, oo markaa nagala hadlaya khadka tooska ah, iyagoo dhisaya maamulkeena raadinta dabiiciga ah.
Xiriirka Dadweynaha - Lahaanshaha koox xirfadlayaal ah oo raadinaya fursado ay ku soo bandhigaan sumaddaada iyo tayada gudaha waa lama huraan. Qodobbada ka soo baxa daabacadaha la xiriira, wareysiyada Podcasts, iyo fursadaha hadalka ee aan uga helno kooxdeena PR waxay soo saareen khuseeya, awood sare oo xusaya oo naga heleysa awood raadinta.
Maktabadda Mawduuca Premier - Waxyaabaha Evergreen ma caawinayaan mid ka mid ah macaamiisheenna mar dambe. Maqaallo dhammaystiran oo leh cilmi-baaris, qaabeyn, nuxur qoto dheer, sawir-qaadis, iyo waraaqo caddaan ah ayaa helaya jahawareer badan. Halkii aan diirada saari laheyn wax soo saarka, waxaan diirada saareynaa dhisida maktabad dhameystiran, oo dhameystiran oo loogu talagalay macaamiisheena kasta.
Ma jiraan waxyaabo ka reeban? Haa dabcan. Waxsoosaarayaasha wax soosaarka ee shirkadaha ee warshadaha aadka u tartamaya ayaa wali wax xoog ah ku heli kara Dhiciyaan Search Engine. Ku dhufo saameynta malaayiin bog waxaana dib ugu soo laaban doona maalgashi. Laakiin shirkadahaas ayaa ka reeban, maahan sharciga. Inta badan ganacsiyada waxay ku fiicnaan lahaayeen inay ku sii kordhiyaan maalgashiga afarta mabaadi'da kor ku xusan.
Tags: dib u xiridkeywordsmozdhiirrigelin la bixiyaywaxyaabaha ugu horreeyawax soo saarka ugu horreeyaxiriirka dadweynahaSEOkobcinta bulshadawarqad cadWarqad cad
Sep 7, 2016 at 1: 58 PM
Soo koobid xiiso leh, mahadsanid.